ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်များသည် Disney Plus တွင်ရှိပါသလား။ ဘာကြည့်မလဲ - Disney Plus
ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်များသည် Disney Plus တွင်ရှိပါသလား။
ခရစ်စမတ်မတိုင်မီအိပ်မက်ဆိုး TIM BURTON's - ၃၁ နှစ်အတွက်ကျင်းပနိုင်သည့်တစ်နှစ်တာ၏အစက်အပြောက်အများဆုံးရာသီကို ၁၃ ညတည်းသာကျင်းပသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ? Freeform သည်သူတို့၏နှစ်စဉ် Halloween ပရိုဂရမ်းမင်းအစီအစဉ်ကို '31 Nights of Halloween 'သို့တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တုန်လှုပ်စရာများကိုတစ်လလုံးလုံးတိုးလာစေခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစတင်၍ ကွန်ယက်ကိုလူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးစုန်းတစ်ခု၊ လူသတ်သမားဆံပင်ညှပ်များကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဒိုင်နိုဆောများနှင့်ညတွင်ဝင်ဆံ့သောအရာအားလုံးကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ (DISNEY ENTERPRISES, INC./ABC) Jack SKELLINGTON (Chris SARANDON)
အဆိုပါ Walking Dead Lucille အဖြစ် Hilarie Burton Morgan ချပစ် Netflix မှာခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်တွေလား။
Disney + တွင်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်
ဒီမှာအချို့ ထိပ်တန်းခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင် သငျသညျလက်ရှိဒစ္စနေး Plus အားအပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဒစ္စနေး + အပေါ် Mickey ရဲ့ခရစ်စမတ် Carol
သေချာတာပေါ့, ဒီအများအပြားဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ခရစ်စမတ် Carol ထွက်ရှိပေမယ့်လည်းအများဆုံးဂန္တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်၊ Scrooge McDuck ကို Ebenezer Scrooge အဖြစ်မည်သူမေ့နိုင်မည်နည်း။ နှင့်သင်တန်း၏, ကတမိသားစုလုံးအတွက်ပျော်စရာပါပဲ။
ဒစ္စနေး + ပေါ်တွင် Muppet ခရစ်စမတ်ကာရို
Jim Henson မှထုတ်လုပ်သောဤဂီတဟာသဒရာမာရုပ်ရှင်သည်စာရင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Muppet ခရစ်စမတ် Carol Charles Dickens ၏ဂန္ထဝင်အပေါ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော၊ ခရစ်စမတ် Carol ။ ဘာများထပ်လိုချင်တာလဲ။
သူစိမ်းအမှုအရာရာသီ4လွှတ်ပေးရန်
ငါခရစ်စမတ်အတွက်အိမ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် Disney +
သငျသညျ 1990 ခုနှစ်မှာကြီးပြင်းလျှင်သင် Jonathan Taylor နှင့်ဤဆိတ်သငယ် - ဖော်ရွေ, သေး - စိတ်ရင်း, အားလပ်ရက်စွန့်စားမှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖွယ်ရှိသည်။ J.T.T. အကြောင်းကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးရင်တောင် ငါခရစ်စမတ်များအတွက်အိမ်ပြန် Be ပါလိမ့်မယ် သငျသညျဤနှစ်တွင်အပေါ်တစ် ဦး အခွင့်အလမ်းကိုယူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဇာတ်ကားတစ်နှစ်ပတ်လုံးကောင်းသောခံစားရသူတွေကိုတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒစ္စနေး + ပေါ်တွင်တစ် ဦး ကခရစ်စမတ် Carol
ဤအရာသည်သင်စဉ်းစားနေသည့်အရာမဟုတ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သင်မေ့လျော့မည်မဟုတ်သည့်အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကားရဲ့ဂန္ထ ၀ င်ပုံပြင်ကိုဂျင် Carrey က Ebenezer Scrooge အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ကယုံကြည်ဖို့ကကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ခရစ်စမတ်မတိုင်မီခရစ်စမတ်မတိုင်မီ Disney + တွင်အိပ်မက်ဆိုး
ခရစ္စမတ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်အ ၀ ရရှိရန်မဲပေးသူအနည်းဆုံးများကပင်နှစ်သက်သောဤခေတ်သစ်ခရစ်စမတ်ဂန္တ ၀ င်ဟင်နရီဆဲလစ်ကတီမ်ဘာတွန်၏တင်ဆက်မှုကို အခြေခံ၍ တင်ဆက်သည်။ အကောင်းဆုံးသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအတွက်အကယ်ဒမီဆုနှင့်အကောင်းဆုံးပြဇာတ်တင်ဆက်မှုအတွက်အူဂိုဆုတို့အပါအဝင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်၎င်းသည်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်များ၌ဆုများစွာအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။
ခရစ်စမတ် / ဟယ်လိုဝင်းဂီတသည်အနည်းဆုံးပြောရလျှင်လူသတ်သမားဖြစ်သည်။
ဘယ်တော့မှအစွန်းရောက် netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
Disney + တွင် Frozen & Frozen II
တချို့ကကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ် အေးခဲသည် ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်အဖြစ်မရေတွက်ပါ၊ သို့သော်ကာတွန်းရုပ်ရှင်၏ပရိသတ်များက၎င်းသည်ဆောင်းရာသီဂန္ထဝင်ဖန်တီးမှုတွင်ကျိန်းသေသည်ဟုမကြာခဏငြင်းခုန်ကြသည်။ ငါတို့သည်သဘောတူလေ့ချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲနှစ်ခုစလုံးကို Disney + တွင်ရနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု:၂၀၂၀ တွင် Netflix သို့မည်သည့်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်လာမည်နည်း။
netflix အပေါ် gran torino ဖြစ်ပါတယ်